डिजिटल मार्केटिंगमा एसईओको महत्त्व - Semalt विशेषज्ञ
डिजिटल मार्केटिंगमा एसईओ अनलाइन दृश्यता वृद्धि गर्न, नयाँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न, तपाईंको व्यवसाय बढाउन र तपाईंको राजस्व बढाउनको स्मार्ट तरीका हो।
त्यसोभए, सफलतापूर्वक तपाइँको अनलाइन व्यापार लाई बढाउनको लागि र विशेष गरी तपाइँको ब्रान्डको लोकप्रियता बढाउन, SEO तपाईको उत्तम तरिका हो। यसका साथै तपाई सुनिश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि यस शर्तमा तपाई सफल हुनुभयो, कुनै रणनीति तपाईले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा ​​राख्नुहुन्न, उत्तम एसईओ उपकरण जस्तै SEO व्यक्तिगत ड्यासबोर्ड, तपाईं कहिल्यै आफ्नो लक्ष्य पुग्न सक्नुहुन्न।
के तपाईं त्यस बिन्दुमा हुनुहुन्छ? त्यसोभए, नडराउनुहोस् किनकि तपाईं उत्तम ठाउँमा आउनुभएको छ जहाँ तपाईं यी सबै चीजहरूको बारेमा प्रभावकारी र प्रभावकारी रूपमा सिक्न सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो लेखमा, हामी तपाइँलाई तपाइँको एसईओ रणनीति कसरी डिजिटल मार्केटिंगमा हस्तक्षेप गर्दछौं देखाउँनेछौं। यसका साथै, बोनसको रूपमा हामी तपाईंलाई यो पनि कसरी गर्ने भन्ने पनि देखाउनेछौं?
सुरू गर्नका लागि, डिजिटल मार्केटिंगमा एसईओको ठाउँ बुझ्ने कोशिश गरौं।
डिजिटल मार्केटिंगमा SEO के हो?
SEO वा खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनलाई वेबसाइटको जैविक स्थिति सुधार गर्ने उद्देश्यले कार्यहरूको सेटको रूपमा परिभाषित गरिएको छ, अर्थात् यसले SERPs मा एक वेबसाइटको स्थान निर्धारण गर्दछ। अर्को शब्दहरु मा, यो तपाइँको वेबसाइट को लागी गुगल को लागी खोज इंजन को नतिजा को शीर्ष मा देखा पर्न अनुमति दिन्छ।
टेक्निकलिटीलाई पन्छाएर, एकले भन्न सक्दछ कि इन्टरनेट स्थिति भनेको बजारसँग मिल्दो जुल्दो चीज हो जुन तपाईंको व्यवसायसँग प्रतिस्पर्धामा हुन सक्छ, यस अवस्थामा वेब।
उदाहरणको लागि, जब तपाई टुथपेस्टको बारेमा सोच्नुहुन्छ पहिलो कुरा के हो? यो एक ब्राण्ड हुन सक्छ, एउटा तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ वा तपाईले प्रयोग नगर्नु भएको पनि, दन्त क्लिनिकहरू, सुपरमार्केट जहाँ तपाईं किनमेल गर्नुहुन्छ, आदि। तपाईको उत्तर विभिन्न कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, जस्तै: प्राथमिकता, स्थान, सम्झना र अडियोभिजुअल उत्तेजना ।
खोज ईन्जिनको साथ पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसो भए, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरूको पहिचान गर्न, तपाईलाई DSD जस्ता शक्तिशाली उपकरणहरू चाहिन्छ।
अवश्य पनि, एक पृष्ठ प्राप्त गर्ने भ्रमणहरूको संख्या धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। यस अर्थमा, र प्राविधिक विवरणहरूमा फर्कनको लागि, त्यहाँ 200 भन्दा बढी कारकहरू छन् जुन खेलमा पहिलो परिणाममा देखा पर्दछ।
हामी तपाइँसँग एउटा साझा गर्छौं जुन हाम्रो दृष्टिकोणबाट, सबैभन्दा प्रासंगिक हो र कम्तिमा तपाइँको प्रयासहरूमा उचित तरिकाले निर्भर गर्दछ।
जैविक दृश्यतामा शामिल कारकहरू
कुञ्जी शब्द प्रकार (ब्रान्ड, सूचनात्मक र लेनदेनको)।
सामग्री, विस्तार, आदि।
डोमेन र पृष्ठ भूगोल
HTML र CSS कोड।
संक्षिप्तमा, एसईओ विभिन्न खोज इञ्जिनहरूको जैविक (भुक्तानी नगरी) नतिजामा वेबसाइटको दृश्यता सुधार गर्ने प्रक्रिया हो। अब जब तपाइँ एसईओको आधारभूत र केहि उदाहरणहरू जान्नुहुन्छ, अब किन समय, पैसा र प्रयास लगानी गर्न सान्दर्भिक छ हेरौं।
डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिमा एसईओ कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
एउटा परिवर्तनशील डिजिटल वातावरणमा र मानिसहरूले दिनहुँ इन्टरनेटमा फेला परेको कुरामा विश्वास गर्नेको साथ, व्यापारको सफलता प्राय: तपाईले वेबमा तपाइँको व्यवसायलाई प्रमोट गर्न के गर्नुहुन्छ वा के गर्दैन त्यसमा निर्भर हुन्छ।
कुनै पनि प्रकारको व्यवसायमा, यो ठूलो प्रविधि परामर्श फर्म हो वा विश्वविद्यालय, एक प्रभावी एसईओ रणनीति अनलाइन दृश्यता बढाउनको लागि एक स्मार्ट तरीका हो; नयाँ ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्नुहोस्, व्यवसाय बढाउनुहोस् र राजस्व बढाउनुहोस्।
SEO प्रयासहरू किन गर्नुहुन्छ? हामी fundamental मौलिक कारणहरूलाई तपाईंले आफ्नो डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिमा विचार गर्नु पर्दछ।
१. एसईओ र एसईएम डिजिटल मार्केटिंगमा, एक संयुक्त प्रयास
जब मार्केटरहरूले बिभिन्न प्लेटफार्महरू र च्यानलहरूको मूल्याate्कन गर्छन्, तिनीहरू प्रायः व्यक्तिगत रूपमा मूल्या rate्कन गर्दछन्। यो गल्ती होईन, तर यो गर्नका निम्ति मात्र एक मात्र र उत्तम तरीका छैन। हामी कसरी सँगै काम गरेर एक अर्काको प्रयासको मोल गर्न सक्छौं?
एसईओ र पीपीसी अभियानहरूको प्रयासहरू धेरै तरीकाहरूमा जोड्न सकिन्छ र यद्यपि तिनीहरू छुट्टै काम गर्दछन्, प्रभावी एसईओ रणनीतिले पीपीसी अभियानहरूको गुणस्तर सुधार गर्न सक्दछ र यसको विपरित।
किवर्डहरू दुबै SEO र सशुल्क विज्ञापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। उदाहरण को लागी, तपाई अत्यधिक लाभदायक कुञ्जी शब्दहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साइट को पृष्ठहरु मा जैविक रुपमा तिनीहरुलाई जोड्न। यद्यपि हालसालै तपाईको साइटले केवल यस च्यानल मार्फत नेतृत्व लिन्छ, भविष्यमा तपाईले लगानी लागत कम गर्न सक्नुहुनेछ वा यसको लागि भुक्तान गर्नुपर्दैन, यो तपाईको रणनीतिमा निर्भर हुनेछ। यसबाहेक, को सहयोगमा SEO व्यक्तिगत ड्यासबोर्ड उपकरण, तपाइँसँग एक क्लिक मा तपाइँको को लागी उत्तम कुञ्जी शव्दहरूमा पहुँच छ।
वास्तवमा, यी कुञ्जी शब्दहरूले दुवै जैविक कार्यहरू र सशुल्क अभियानहरू परिभाषित र योजनाको लागि आधारको रूपमा काम गर्दछ।
अधिग्रहण लागत, म्याच, स्थिति SERPs मा रूपान्तरण स्थिति, रूपान्तरण दर, केहि पक्षहरू हुन् जुन अभियानको प्रभावकारितामा सुधार गर्न सक्दछन्। संक्षेप मा, अर्को को प्रयासहरु संग एक रणनीति संयोजन गरेर, यो सम्भव छ ग्राहक अधिग्रहण लागत कम गर्न र यसैले तपाइँको मार्केटिंग को प्रयास लाई लाभदायक बनाउने।
२. SEO इनबाउन्ड मार्केटिंगको स्तम्भको रूपमा, रूपान्तरण टनेल सिर्जना गर्दछ
Of ०% प्रयोगकर्ताहरूले अझै उनीहरूको खोज (स्रोत: स्थिति ल्याबहरू) सुरूवात गर्नु अघि ब्रान्डको बारेमा उनीहरूको दिमाग बनाएका छैनन्।
यदि हामी वृद्धि चक्रको बारेमा सोच्छौं भने, यो सबै वेबसाइटमा अपरिचितहरूलाई आकर्षित गर्न सुरू हुन्छ। त्यसो भए, धेरै एसईओ प्रयासहरूले यसमा योगदान पुर्‍याउँछ: एसईओ मैत्री डिजिटल सामग्री रणनीति बनाउन देखि एक ब्याकलिink्क रणनीति विकास गर्न र साइट ब्राउज गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको अनुभव सुधार गर्न।
एक चोटि जब हामी पर्यटकहरूको स्थिर स्ट्रिम सिर्जना गर्दछौं, फ्लाईव्हीलले मोड्न सुरू गर्न पर्याप्त सामर्थ्य हुनेछ। त्यो हो, हामी भ्रमणहरूलाई लेडमा रूपान्तरण गर्न, विकासका अवसरहरू एमक्यूएलहरू, एमक्यूएलहरू व्यवसायिक अवसरहरूमा र अन्तमा ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्न कार्यहरू शुरू गर्न सक्दछौं।
यो प्राप्त गर्नका लागि सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको तपाईले अझ राम्रो सेवाहरू प्रदान गर्नु हो भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसोभए, तपाईं एक फ्रीलांसर वा एक एसईओ एजेन्सी हो, हामी तपाईंलाई दोहोरो अवसर प्रदान गर्दछौं: अधिक ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्नुहोस् र SEO व्यक्तिगत ड्यासबोर्डको साथ पर्याप्त पैसा कमाउनुहोस्।
SEO. एसईओ ले योग्य यातायात मार्फत बिक्री बढावा दिन्छ
यी प्रयासहरू बिक्रीमा कसरी अनुवाद हुन्छन्? एसईओ नेतृत्व उत्पादन का निरन्तर स्रोत हो। व्यक्तिसँग कामको तालिका नभए जस्तो, SEO सालको हरेक दिन २//7 काम गर्दछ।
एक एसईओ रणनीति प्रभावी छ भन्नका लागि, तपाईंले योग्य नेतृत्व उत्पादनको लागि खोज्नु पर्छ।
कुन प्रयोगकर्ताले अधिकतम खरीद गर्न सक्छ? के त्यो पनि धेरै पैसा छ? एसईओ गरिरहनु भनेको साइटलाई केवल पहिलो स्थानमा राख्नु मात्र होईन, यसले यसलाई त्यस्तो प्रकारले गरिरहेको छ कि यसले कम्पनीको राजस्वमा योगदान पुर्‍याउँछ।
यो सयौं आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्न कम उपयोगि हुनेछ जुन तपाईंबाट कहिल्यै खरीद गर्दैनन्। तर यो तपाइँको रणनीतिमा निर्भर गर्दछ, उदाहरणका लागि, तपाइँबाट नकिने सम्भावनाहरूले ट्राफिकको निरन्तर प्रवाहमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ र साइटको अधिकार निर्माण गर्दछ। जे होस्, यदि तपाईं दौड ठूलो र उत्तम परिणामहरू प्राप्त गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईंले एसईओ पर्सनल ड्यासबोर्डको फाइदा लिनु पर्छ।
कसरी एक एसईओ रणनीति बनाउन?
यो बहु कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, जस्तै: लक्ष्यहरू, तपाईंको व्यवसायको आकार, बजेट, तपाईंको अनलाइन र अफलाइन व्यापारको हालको स्थिति, प्रतिस्पर्धा र धेरै विकासशील तत्त्वहरू। त्यस उद्देश्यका लागि हामी केही सुझावहरू साझेदारी गर्दछौं जसले तपाईंको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न ट्र्याकमा रहन मद्दत गर्दछ।
एसईओ टेक्नोलोजीको बारेमा कम र मानव व्यवहारको बारेमा बढी छ
यो सत्य हो कि अनुक्रमणिका, कोड स्निपेट्स, क्यासिंग, 1०१ कोड, 4०4 पृष्ठ, ट्र्याकिंग, इत्यादि जस्ता कारकहरू, एक पृष्ठ स्थितिका लागि सशर्त कारकहरू हुन्। तर, यदि तपाइँ प्रयोगकर्ताहरूमाथि तपाइँका प्रयासहरू आधार बनाउनुहुन्छ र खोजी ईन्जिनहरूमा होइन, २०० भन्दा बढी कारकहरू सम्भाव्य हुन्छन्, जसले प्रयोगकर्ताहरूले खोजिरहेका छन् र सबै उत्तम अभ्यासहरू बीच एक आदर्श मेल बनाउँदछ।
वेबसाइटलाई एक सुपरमार्केटको रूपमा सोच्नुहोस्: प्रत्येक श्रृंखलाले आफ्नो तखता बिभिन्न तरीकाले व्यवस्थित गर्दछ, प्रवेश द्वारमा यो इलेक्ट्रोनिक्स वा फलफूल र तरकारीहरू हुनसक्दछ। यद्यपि प्रत्येकले आफ्नो aisles लाई बिभिन्न तरीकाले व्यवस्थित गर्दछ, तिनीहरू सबै कोटि अनुसार श्रेणीबद्ध गर्दछ।
उदाहरण को लागी, कपडा विभाग मा, तपाईं महिला लुगा देखि बच्चा लुगा सम्म सबै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए तपाईले पहिला ब्लाउज लिनु पर्दैन र त्यसपछि बच्चा मोजामा जानु पर्छ।
तपाइँको वेबसाइटमा उस्तै कुरा हुन्छ, ग्राहकले उनीहरूलाई मन पर्ने "सुपरमार्केट" मा कति समय खर्च गर्दछ? तिनीहरूलाई किन यो मनपर्‍यो? तिनीहरू कति पटक आउँछन्? तिनीहरूले कति किन्छन्? किन तिनीहरू तपाइँसँग फिर्ता आउने निर्णय गर्छन्?
जब तपाइँ तपाइँको वेबसाइटहरु तपाइँको ग्राहकहरु को समस्याहरु र चुनौतिहरु को समाधान को स्रोत को रूप मा हेर्नुहुन्छ, SEO प्रयास अधिक मानवीय र कम टेक्निकल हुन्छ।
SEO "तपाइँ" को बारे मा कम र तपाइँको ग्राहकहरु को बारे मा कम छ
तपाइँका सबै उत्पादनहरू र/वा सेवाहरूको प्रचार गर्न चाहानुहुन्छ, तर फेरि र अघिल्लो बिन्दुमा जानको लागि "बमबारी" "प्रयोगकर्ता" "मसँग, पहिले मलाई र त्यसपछि म" लाई धेरै थकाउने छ।
"म के गर्छु" बाट "म तपाईंलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छु" बाट कुराकानी बदल्नुहोस्।
याद गर्नुहोस् कि तपाइँको वेबसाइट अपरिचितहरू, सम्भावितहरू र ग्राहकहरूका लागि हो, सुपरमार्केट उदाहरणको साथसाथै, वेबसाइट तपाइँको ग्राहकहरूको खरीद प्रक्रियाको साथ पigned्क्तिबद्ध हुन आवश्यक छ, जानकारी समावेश गर्दछ जसले तिनीहरूलाई निर्णय लिन मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ आगन्तुकहरू छन् जो पहिले नै तपाईंको समाधानहरू जान्दछन् (तपाईं के गर्नुहुन्छ वा के बेचनुहुन्छ), तर तपाईंको ब्रान्ड हैन। अर्कोतर्फ, त्यहाँ अपरिचितहरू पनि छन् जसले जान्दैनन् कि तपाईंको समाधानहरूले उनीहरूका चुनौतीहरू र आवश्यकताहरू समाधान गर्न सक्छ।
एसईओ अप्रासंगिक मेट्रिक्स निगरानीको बारेमा कम छ र स्मार्टको बारेमा बढि
SEO मा, तपाईले हामी प्रति दिन स collect्कलन गर्ने डेटाको विशाल रकममा हराउन सक्नुहुनेछ।
तपाईका प्रयासहरूको प्रभावकारिता बुझ्न के के चीजहरू छन्?
मेट्रिक्स तपाईंको लक्ष्यमा निर्भर गर्दछ। यदि जैविक यातायात सुधार गर्नु तपाईंको लक्ष्य हो भने, रूपान्तरण दर मापन गर्न यो कत्तिको सान्दर्भिक छ?
एसईओ कार्यहरू मूल्याate्कन गर्न, हामीले स्पष्ट रूपमा हासिल गर्नका लागि परिभाषा गर्न आवश्यक छ। वास्तवमा, सफलताको मापन विशिष्ट उद्देश्यहरूको साथ मात्र सम्भव छ र यी प्रत्येक कम्पनी वा क्षेत्रमा फरक छन्।
धेरै तरीकाले, सफल एसईओ र डिजिटल मार्केटिंग प्रयासहरू तपाईंको डिजिटल रणनीति लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछन्। त्यसकारण, व्यवसायहरूले यसलाई पहिचान गर्न आवश्यक छ र तदनुसार मार्केटिंग बजेट बाँडफाँड गर्नु पर्छ।
यस गाईडमार्फत हामीले भर्खरै डिजिटल मार्केटिंगमा एसईओको ठाउँ देखाएका छौं। वास्तवमा, दुबै एसईओ र डिजिटल मार्केटिंग तपाईंको अनलाइन व्यापारको सफलताको लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसोभए, तपाईं आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुभयो भनेर निश्चित गर्न, एसईओ व्यक्तिगत ड्यासबोर्ड जस्ता राम्रो एसईओ उपकरणको सहयोगमा तपाईंको डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिमा एसईओमा सामेल हुनुहोस् तपाईंको मार्ग पछाडि छ।
यसबाहेक, DSD उपकरण तपाइँको साइट मा अधिक ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी तपाइँलाई राम्रा SEO सेवाहरु प्रदान गरेर सदस्य को लागी पर्याप्त पैसा कमाउन को लागी Semalt पार्टनर कार्यक्रम।
विशेषज्ञ मद्दत प्राप्त गर्न वा तपाईंको प्रश्नहरूको उत्तर दिन, तपाईं सक्नुहुन्छ हामीलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस्।